MADAGASCAR Titanium Distributor & Stockist
MADAGASCAR - Titanium Distributor & Stockist
Isika mpitarika maneran- Distributor & stockist ny Titanium , ary mpisava lalana amin 'ny fitondrana amin'ny alalan'ny aterineto tsena titane alloys sy ny fitaovana manokana amin'ny harafesiny fanoherana , hafanana fanoherana , avo hery sy ny fananana mpanakiana . Ny tsena an-tserasera www.ti-shop.com mitondra ny hotorina hatraiza hatraiza isan-karazany ny habeny sy ny naoty ao Wire / Bar / Rod / Sheet / Plate / Foil / Tube / Pipes .
Isika manompo isan-karazany ny mpanjifa amin'ny orinasa isan-karazany ao anatin'izany , Anjerimanontolo , fikarohana laboratoara , Fabricators , mpahay siansa , Medical maniry , Motorsport , Prototyping , Chemical fanodinana Zavamaniry , Menaka & Entona , Sakafo fanodinana .
Ny manokana dia eo amin'ny fivarotana kely be . Lehibe kokoa ihany koa izahay manolotra tsara tarehy be amin'ny vidiny amin'ny fanaterana ny fotoana fohy .